सोमबार पनि सुनको मूल्य बढ्यो , कतिमा हुँदैछ कारोबार ? - सिम्रिक खबर
सोमबार पनि सुनको मूल्य बढ्यो , कतिमा हुँदैछ कारोबार ?
काठमाण्डौ – सुनचाँदीको भाउ आज बढेको छ । आइतबार वृद्धि भएको सुनको मूल्यले आज पनि तोलामा ३०० रुपैयाँले वृद्धि भई निरन्तरता पाएको हो । सुनको भाउ आज तोलामा तीन सय रुपैयाँ बढेर तोलाको ९७ हजार ५ सय रुपैयाँ निर्धारण गरिएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ ।
सुन हिजो तोलाको ९७ हजार २ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । यस्तै चाँदीको भाउ पनि सोमबार तोलामा २५ रुपैयाँले बढेर प्रतितोला १ हजार ३६५ रुपैयाँ तोकिएको छ । चाँदी हिजो तोलाको एक हजार तीन सय ४० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । हाल देशभर जसो जारी गरिएको निषेधाज्ञाका कारण सुन चाँदी व्यवसाय ठप्प भएतापनि मूल्य भने निर्धारण गरिएको छ । यद्यपी व्यवसायीहरु भने कागजमा मात्र मूल्य तथा व्यापार सिमित भएको बताउँछन् ।